साउनदेखि मजदुरको तलब १५ हजार, ब्लडमनी कुरिरहेकालाई सीडमनी !
Wednesday, May 9th, 2018 | edainik | अर्थ ⁄ वाणिज्य
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा कार्यरत श्रमिकहरुको मासिक तलब बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । हाल ९ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लिइरहेका श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ पुर्‍याउने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ ।
साथै श्रमिकमाथिको शोषणलाई अन्त्य गर्न बैंकमार्फत अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री विष्टले गृहकार्य थालेका छन् । यसका लागि श्रम नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि मजदुरको नयाँ न्युनतम् पारिश्रमिक तोकेर लागू गराउन गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई बताए । यसका लागि ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले अब मजदुरको न्युनतम् तलव १५ हजारभन्दा माथि लैजाने योजना बनाएको छ । तर, समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले त्यसको अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
ब्लडमनी कुरिरहेकालाई ‘सीडमनी’
यसैवीच अहिले ब्लड मनी बुझाउन नसकेर विदेशका जेलमा अलपत्र परेका कामदारका लागि ‘सीड मनी’ व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा मन्त्री विष्ट जुटेका छन् । विदेशको जेलमा रहेका कतिपयको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्लडमनी तिरेर रिहा हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट त्यस्ता पीडितका परिवारलाई ‘सीड मनी’ का रुपमा रकम उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छन् ।
कोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्दा अन्य पीडितलाईर् रकम दिन नसकिने अवस्था हुने भएकाले केही रकम ब्लड मनी संकलन अभियानमा ‘सीड मनी’का रुपमा राख्न छुट्टै निर्देशिका तयार गरिँदैछ । यसले पीडित परिवारलाई ब्लड मनी संकलनमा सहयोग पुग्ने र परिवारलाई पहल गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
केके गर्दैछन् श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट ?
एमालेका सचिवसमेत रहेका बिष्टले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा प्रवेश गरेसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेका कैयौं समस्या समाधानका लागि ‘एक्सन’ लिइहाल्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, त्यो अनुसार काम खासै हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशबाट ल्याइने मागपत्र दूतावासबाट मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गराएर पहिलो पटक कठोर कदम चल्ने संकेत दिएका छन् ।
तर, अझै दुई महिना उनी कता हराएका थिए भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेकै छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै सिन्डिकेट तोड्ने बताएका मन्त्री बिष्टले त्यसको असर देखिने गरी काम गरिसकेका छैनन् ।
युएईमा कामका लागि जाँदा पुलिस रिपोर्ट लिनुपर्ने र त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई कुटनीतिकरुपमा हटाउने, विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदारलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा उनले कदम चालेका छन् ।
तर, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरुले बिष्टसँग योभन्दा बढी अपेक्षा गरेका छन् । विशेष गरी विदेश जाँदा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क बुझाएर जानुपर्ने र उल्टै म्यानपावरबाट ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नेमा युवाहरुको चासो छ ।
ऊर्जामन्त्री हुँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने सरकारी कार्यालयलाई तह लगाएका बिष्टले ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई कसरी तह लगाउँछन् भन्नेमा धेरैको चासो छ । तर, बिष्टले अहिले स्पष्ट देखिने गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई कारवाहीकै अभियान थालिसकेका छैनन् । उनले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आँधिबेहेरी’ आउन लागेको बताउँदै आन्तिरिकरुपमा सुधारका तयारीहरु भइरहेको बताएका थिए ।
आखिर के-के गर्दै छन् त मन्त्री बिष्ट ? मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री विष्टका भावी योजना यस्ता छन्ः
ठगीको विवरण टेबलमा
श्रममन्त्री बिष्टको टेबलमा ठगी गर्ने म्यानपावरको विवरण पुगिसकेको छ । मन्त्री भएलगत्तै उनले अहिलेसम्मका म्यानपावरबाट भएका ठगीको विवरण मागेका थिए । कुन म्यानपावरले कति कामदारलाई कुन हदसम्म ठगी गरेका रहेछन् भन्ने विवरण वैदेशिक रोजगार विभागले मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्री बिष्ट अहिले त्यसको अध्ययनमा छन् । ‘मन्त्रीज्यु आफैं त्यसको अध्ययन मिहिन ढंगले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यसलाई नै आधार बनाएर केही महत्वपूर्ण पहल लिन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अनलाइनलाई ब्यापक बनाउने रणनीति
मन्त्री बिष्टले ठगी नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउने रणनीति लिएको उनको सचिवालय बताउँछ । अहिले म्यानपावर व्यवसायीले फि्र भिसा र टिकटको सरकारी निर्णय लागू गरेका छैनन् । कामदारसँग १० हजार सेवा शुल्क लिनुपर्नेमा लाखभन्दा बढी रकम अशुलिरहेका छन् । यसलाई रोक्न मन्त्री बिष्टले म्यानपावरको कारोबारमाथि निगरानी गर्न अनलाइन सिस्टमको विकासका लागि गृहकार्य गरिरहेको सचिवालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी श्रम ग्राम ताहाचल र वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा रहेको अस्तव्यस्ता र घुसखोरी अन्त्य गर्न उनले अनलाइन तथा सीसी टीभी निगरानीलाई अत्याधुनिक तवरले अघि बढाउन लागेको स्रोत बताउँछ । एकीकृत अनलाइन सिस्टम बनाएर वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध सबै संस्था र निकायको कामलाई पारदर्शी गर्ने काममा अहिले आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्री विष्टको सचिवालयले अनलाइनखनबरलाई जानकारी दियो ।
के-कस्तो अनलाइन सिस्टम कसरी लागू गरिँदैछ भन्ने विषयलाई भने गोप्य राखिएको छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो सिस्टम आएपछि कामदार ठगिने र दुःख पाउने अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ ।
विदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने तयारी
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदाहरुले विदेशमै श्रम स्वीकृति नवीकरण (रि-इन्ट्री) गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि तयारी पनि थालेको छ । यसका लागि प्रारम्भिकरुपमा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन तयारी सुरु भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारका अनुसार कम्तिमा एकपटक विदेशमा नै श्रम री-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि छलफल थालिएको छ । उनका अनुसार वैधानिकरुपमा विदेश पुगेकाको हकमा एकपटक सम्बन्धित देशको दूतावासबाट श्रम रि-इन्ट्री गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि छलफल भइरहेको छ ।
नियमावली संशोधनपछि आˆनो भिसा अवधि थपेर विदेशमा थप समय बस्नेहरुलाई अब सरकारले विदेशस्थित राजदूतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमार्फत नै श्रमको रि-इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नेछ ।
‘एकपटकभन्दा बढी रि-इन्ट्री दिँदा कामदार स्वेदेश नै फर्किन नचाहाने पनि हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षलाई हेरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
यो व्यवस्था पछि घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा अवैधानिकरुपमा बसिरहनुपरेकाहरुलाई पनि सहज हुनेछ । सरकारले विदेशमा नै श्रम रि-इन्ट्रीको व्यवस्थाका लागि दुई वर्षअघि नै गृहकार्य गरेको थियो ।
अदक्ष कामदार विदेशिन रोक्ने योजना
मन्त्री बिष्टले तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विभिन्न तयारी गरिरहँदा सीप सिकाउने कार्यक्रमलाई फलदायी हुने गरी देशभर फैलाउँदो योजना पनि बनाएका छन् । तत्कालै सम्भव नभए पनि केही वर्षभित्रै सीप नभएका अदक्ष कामदारलाई विदेश जान रोक्ने तयारीका साथ मन्त्री बिष्टले तयारी थालेका छन् । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष योजना ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
मन्त्री बिष्टले पनि अदक्ष कामदारलाई विदेश जान रोक्ने निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केही वर्ष सीप सिकाउने संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
अदक्ष कामदारले विदशेमा राम्रो तलव नपाउने, हेपिने, दुःख पाउने लगायतका समस्या छन् । त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट विशेष योजनाका साथ सीप सिकाउने कार्यक्रमहरुको प्रवर्द्धन गर्दै आधार तयार गर्ने बताएको छ । यसका लागि शिक्षा तथा उद्योग मन्त्रालयसाग पनि छलफल अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कार्यदलले धमाधम काम गर्दै
मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या समाधान गर्न एक्लो प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै केही कार्यदलहरु बनाएर सुझावहरु मागेका छन् । छुट्टा-छुट्टै विषयमा सुझाव लिन गठन भएका ४ वटा कार्यदलहरुले धमाधम कामहरु गरिरहेका छन् ।
रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे श्रम सचिवको नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ । अहिलेसम्म भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या समाधान, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब सम्झौता गर्दा केकस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, कामदारको विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे अध्ययन श्रम सचिवको नेतृत्वको कार्यदल सक्रिय छ ।
म्यानपावरलाई ऐनमार्फत कस्ने योजना
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले संसदीय समिति गठन गरेपछि वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अब ऐन संशोधन गर्दा म्यानपावर व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन र कानुनको दायरमा राख्न कडा किसिमका व्यवस्थाहरु राख्ने योजना छ ।
यसअघि नै म्यानपावरहरुको धरौटी १ करोड बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट भएको छ । म्यानपवारको कारोबार बैंकमार्फत गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि ऐनमा राख्न यसअघि नै गृहकार्य भएको थियो ।
अब यसमाथि छलफल चलाएर कानुनी कारवाहीका प्रावधानहरु मजबुत गर्ने व्यवस्थासहित ठगी रोक्ने गरी ऐन ल्याउने योजनामा मन्त्री बिष्ट छन् ।
जिएमआरले बेचेको आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता
श्री एयरलान्सकाे काठमाडौं–राजविराज उडान असार १० देखि
तातोपानी नाका आगामी मेदेखि सञ्चालनमा अाउने
नारायणगढ–मुग्लिन सडक सहज भएसँगै सौराहामा पर्यटक बढे
एकै महिनामा तीन ठूला होटलमा डेढ अर्बको विदेशी लगानी गर्न प्रस्ताव
नेपालमा ‘नेक्सन’ को उत्साहजनक बिक्री
Tuesday, June 12th, 2018/
२२२ स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् बैंक, एक वर्षमा खोलिए ४६८ शाखा
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने यस्तो छ तयारी
सिमराको साःख स्टिलभित्र मजदुरको मृत्यू
दश दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण अपडेट नगर्ने कर्मचारीको तलब रोक्न निर्देशन
एनआईसी एसियाले फेरि दियो निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर
घटेन व्यापार घाटाः १० खर्बको आयात हुँदा निर्यात ६६ अर्ब मात्र
नेपाल बैंकले २५ वटा शाखा विस्तार गर्ने
अन्नपूर्ण उड्न तयार